Izahay dia mamakafaka ny devolo GigaGate, tetezana WiFi avo lenta | Vaovao momba ny gadget
Izahay dia mamakafaka ny devolo GigaGate, tetezana WiFi avo lenta
Ny fifandraisana WiFi ao an-trano dia lasa olana lehibe kokoa satria maro ny fitaovana miditra ao amin'ny fampifandraisana ny tranontsika. Tsy hoe satria sarotra amintsika ny mankafy ny fantsom-pifandraisana feno ao amin'ny efitrano lavitra indrindra ny router, fa ny fahafenoan'ny tarika sy ny lafiny hafa kosa dia miha-mitombo hatrany amin'ny kalitaon'ny fifandraisana. Izany no antony niasan'ny devolo sy fikarohana nandritra ny taona maro hanatsarana ny fomba fifandraisantsika an-trano sy any amin'ny birao. Ao amin'ny Actualidad Gadget dia nanolotra anao izahay mihoatra ny indray mandeha famakafakana lalim-paka ny sasany amin'ny vokatra, fa Ilay mampifantoka ny masontsika anio dia ny devolo GigaGate, seranan-tsambo WiFi izay manome antsika hatramin'ny 2 Gbit / s miaraka amina endrika mahavariana sy kalitaon'ny fitaovana.
Avy eo dia hofariparitanay ireo lafiny inona avy izay mahatonga ny devolo GigaGate ho tena manokana, ary ny antony anolorana azy ho fomba hafa tsy mahaliana ao an-trano.
1 Ny endrika sy ny fitaovana
3 Ahoana no hametrahantsika ny devolo GigaGate? Mampiasà traikefa
4 Endri-javatra, hevitra ary vidiny
Ny endrika sy ny fitaovana
devolo tsy mandiso fanantenana velively amin'ity lafiny ity, ny orinasa alemanina dia mampiasa fitaovana maharitra maharitra indrindra azonao eritreretina amin'ny vokatra ao aminy. Ao amin'ny GigaGate dia mahita vokatra tsara sy tsara isika izay tsy hifandona na aiza na aiza tiantsika hametrahana azy ireo. Voalohany indrindra, ny endriny fisaka sy mahitsizoro dia manome ny fahaizan'ny fahaizan'ny mametraka azy roa mitsivalana sy mitsangana. Ho an'ity fametrahana mitsangana ity dia manana takelaka roa azo esorina isika ao aoriana izay hitazonana azy hijoro sy hiorina tsara na aiza na aiza hametrahantsika azy.
Ny zavatra voalohany manaitra antsika dia ny tonony mamirapiratra amin'ny firakotra azy, raha manolotra «jet black» ny eo aloha sy ny aoriana lamaody tokoa tato ho ato, ao amin'ny elanelany afovoany dia hanana fitaovana plastika amin'ny mainty matte izay madio kokoa isika ary mandroaka ny dian-tànana. Eo anoloana, na apetrantsika mitsivalana na mitsivalana, dia ho hitantsika ny fandaminana ny LED izay hampiseho amintsika ny satan'ny fotony sy ny fifandraisana izay namboarinay.
Andao atomboka amin'ny fototra, manome seranana GigaBit any aoriana izy ary koa ny fifandraisana amin'ny tamba-jotra elektrika ao an-trano. Mila milaza aho fa tsy nahomby isika fa ny base koa dia misy output LAN, raha toa ka tsy mihoatra ny iray ny router (na dia tsy fahita firy aza). Ity base ity dia handefa tamba-jotra haingam-pandeha haingam-pandeha ao amin'ny tarika 5 GHz malaza, Ho an'ireo izay tsy mahalala an'io, ity tarika tsy mahazatra any Espana ity no ampiasain'ny orinasa toa an'i Movistar hanolotra WiFi +, mahatratra 300 Mbps amin'ny fandefasana mangina.
Mikasika ny zanabolana, eto dia hanana seranan-tsambo GigaBit iray ihany koa izahay amin'izay hahafahantsika manampy kapila matevina na karazana fifandraisana hitanay fa mety, hahafahana miditra ao amin'ny fisie na ny atiny audiovisual ho rahona noho ny fisaorana ny logiciel an'ny devolo. Eo ambonin'ny ambony indrindra dia mahita seranana LAN tsy latsaky ny efatra isika mba hahafahantsika mamadika an'io fifandraisana WiFi io ho tariby ary hahavery ny kalitao faran'izay kely azo atao, safidy iray tsy azo ovaina ho an'ny birao na ho an'ireo izay manapa-kevitra ny hampiasa ny seranana Wi-Fi hilalao amin'ny lalao lalao, amin'ity fomba ity no hahitan'izy ireo ny latency farany ambany farany ambany.
Ny router dia manana herin'ny 2 Gbit / s hanolotra traikefa haino aman-jery tsara indrindra. Ankoatr'izay, ny fitaovana roa, na ny base na ny satellite, dia manana teknolojia Quantenna 4 × 4 pKa ny fifandraisana dia mitodika mitovy amin'ny lafiny rehetra, ka tsy misy efitrano ao an-trano hisy fiantraikany lehibe. Ny zava-misy dia aorian'ny fitsapana dia faly isika amin'ny lafiny iray sy amin'ny lafiny iray hafa. Mba handefasana angona amin'ny fomba azo antoka indrindra, ny seranan-tsambo WiFi dia misy encryption AES ary mifanaraka amin'ny router rehetra, ny mpandray haino aman-jery ary na ny decoder an'ny televiziona toa ireo avy amin'ny Movistar + na Vodafone TV.
Raha ny mitambatra, afaka manampy zanabolana valo amin'ny fototra iray ihany isika, raha tsy very na dia kely aza ny fahefana, izay manome antsika famantarana tsara momba ny karazana vokatra izay iatrehantsika.
Ahoana no hametrahantsika ny devolo GigaGate? Mampiasà traikefa
Raha milaza izany dia tsy mitovy amin'ny fanaovana azy, dia nidina niasa izahay mba hampifanaraka ny devolo GigaGate. Toy ny vokatra devolo rehetra amin'ity karazana lohahevitra ity, dia tsy azo atao ny mametraka. Hanaraka ireto dingana manaraka ireto amin'ny fomba marina izahay:
Ampidirinay ao anaty indostrialy ny fototry ny devolo GigaGate ary ao amin'ny port LAN ny router ary zahana raha hazava tsara ny jiro LED. Ankehitriny dia tsindrio ny bokotra fifandraisana eo anoloana.
Mandeha any amin'ny efitrano tianao hanitarana ny fifandraisana WiFi amin'ny fomba milamina izahay, izay ananantsika fitaovana bebe kokoa misy olana na amin'ny teboka antonony
Mampifandray ny satelita deviga GigaGate amin'ny ankehitriny isika, ary hanery moramora ny bokotra fifandraisana toy ny teo aloha ihany.
Izao dia mila miandry minitra vitsivitsy fotsiny isika mba hiovan'ny jiro fotsy manelatselatra ho an'ny fotsy roa.
Tsy mora izany, aleo atrehana. Izany no mahatonga ny devolo ho lasa iray amin'ireo safidy tsara indrindra ho an'ireo izay manararaotra an'io karazana vokatra io. Zava-dehibe ny fahafantarantsika fa tsy maintsy miandry ora vitsivitsy isika hipetraka amin'ny seranan-tsambo WiFi ho an'ny fampisehoana azo atao rehetra. Vantany vao lasa ny fotoana mety, dia niroso tamin'ny fanatanterahana ny fampisehoana mifanaraka amin'izany sy ny salanisa eo amin'ny seranan-tsambo GigaGate izahay, ambanin'ny router Routistar + ary fifandraisana hatramin'ny 300 Mbps symmetric ambony sy ambany:
13 metatra miala amin'ny WiFi amin'ny zanabolana: Fahalavoana 100 + fiakarana 100/43 ms PING
13 metatra miala amin'ny LAN amin'ny zanabolana: 289 latsaka + 281 fiakarana / 13 ms PING
30 metatra miala amin'ny WiFi amin'ny zanabolana: 98 latsaka + 88 fiakarana / 55 ms PING
30 metatra miala amin'ny WiFi amin'ny zanabolana: 203 fianjerana + 183 fiakarana / 16 ms PING
Zava-dehibe ny hitadidiantsika fa ity tetezana WiFi ity tonga hitondra antsika haino aman-jery haino aman-jery vahaolana avo lenta amin'ny fomba tsara indrindra, noho io antony io dia tianay ny hampahatsiahy anao fa lavitra lavitra lavitra noho ny teboka WiFi tsotra io, raha ny tena izy tsy misy manolotra ireo fiasa ireo amin'ny vidiny tsara kokoa.
Endri-javatra, hevitra ary vidiny
Ny devolo GigaGate dia manana seranana, araka ny efa nolazainay GigaBit amin'ny zanabolana, midika izany fa afaka mampifandray ny HHD amin'izy io isika mba hametahana zavatra mitovy amin'ny NAS. Izahay dia tsy te-hanadino ny fotoana ilazana aminao fa devolo dia manome rindrambaiko mahaliana ho an'ny macOS ary koa ho an'ny PC sy Linux, antsoina hoe devolo Cockpit izany ary hahafahanay manatsara ny zava-bitan'ny tamba-jotra an-trano, misafidy izay sahaza tarika ary koa ny fanovana ny masontsivana amin'ny lesoka ny fifandraisanay, nanoro hevitra fatratra fa fotoana fohy aorian'ny fampifandraisana azy ary miasa tsara dia miroso amin'ny fisintomana sy ny fikirakirana azy ireo ianao, tsy hanenina kely indrindra ianao.
Azonao atao amin'ny GigaGate devolo izany en ITY FIAINANA ityavy any Amazon na amin'ny Ity rohy ity avy amin'ny tranonkala ofisialy, amin'ny vidiny manodidina ny 215 euro ho an'ny Kit Starter na 134 euro isaky ny zanabolana fanampiny.
Malahelo ny seranana Ethernet iray hafa eo amin'ny seranana aho
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » hevitra » Izahay dia mamakafaka ny devolo GigaGate, tetezana WiFi avo lenta
Apple Music for Android dia nohavaozina miaraka amina interface mitovy amin'ny an'ny iOS
Apple dia nanambara ny fanavaozana ny Mac Pro ary miresaka momba ireo Mac sisa